Ohatra 6 amin'ny fomba ahafahan'ny orinasa mitombo mandritra ny areti-mandringana | Martech Zone
Tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana dia orinasa maro no nanapaka ny teti-bolan'ny dokam-barotra sy ny varotra azy noho ny fihenan'ny vola miditra. Nihevitra ny orinasa sasany fa noho ny fandroahana betsaka dia hampiato ny fandaniany ny mpanjifa ka hihena ny teti-bolan'ny dokam-barotra sy ny varotra. Nihombo ireo orinasa ireo ho setrin'ny fahasahiranana ara-toekarena.
Ho fanampin'ireo orinasa misalasala hanohy na handefa fanentanana dokam-barotra vaovao, dia niady mafy ihany koa ny fahitalavitra sy ny radio hampiditra sy hitazona ny mpanjifa. Ireo masoivoho sy orinasam-barotra dia afaka mampiasa an'io fotoana io hanampiana ny roa tonta handresy ny aretina vokatry ny areti-mandringana. Araka ny hitan'ny Silver Frog Marketing, izany dia mety hiteraka fanentanana amin'ny dokambarotra sy marketing izay nanampy tamin'ny fanitarana ny orinasa nandritra ny areti-mandringana. Ity misy fomba nahafahan'ny orinasa nitombo nandritra ny areti-mandringana, ary ny fomba fanao ao an-tsaina mandritra ny fananganana doka amin'ny dokambarotra aorian'ny pandemioma.
Raha nijery ny fantsom-pitrandrahana ny orinasany rehefa tonga ny areti-mandringana, dia niasa ny mpitarika hitandrina sy hampitombo ny fifandraisana fa tsy hiankina amin'ny vinavina. Orinasa maro no nanao ny hetsika hampiasa vola amin'ny fanovana dizitaly satria tsy niasa tamin'ny fahaizany ny mpiasa satria nanhena ny fiantraikan'ny asa ankapobeny. Amin'ny alàlan'ny fifindra-monina sy ny fandefasana automatique ny fizotran'ny anatiny dia afaka nitondra fahombiazana ny orinasa.
Ety ivelany, ny fifindra-monina amin'ireo sehatra matanjaka kokoa dia nanokatra fotoana hanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa ambony. Ny fanatanterahana ny dian'ny mpanjifa, ohatra, dia nahatonga ny firosoana, ny lanja ary ny tombontsoa azo avy amin'ny mpanjifa ankehitriny. Na ny fiatraikany anatiny na ivelany dia nanery dolara bebe kokoa ary manome ny làlana voalohany amin'ny varotra lohataona rehefa niverina ny toekarena.
Mifampiraharaha amin'ny farany
Ho an'ny fahitalavitra sy radio dia niteraka tsy fahazoana antoka ny areti-mandringana noho ny fiovan'ny tetibola dokam-barotra sy ny orinasa nisintona ny fampielezan-kevitr'izy ireo. Nanjary nazava fa ny masoivoho sy ny gara dia mila miara-miasa mba hanampiana amin'ny fanatanterahana ny filan'izy ireo. Ny fiaraha-miasa amin'ny tobim-piantsonana hifampiraharaha amin'ny taha eo amin'ny lafiny farany dia tsy ny tombotsoan'ny gara ihany, fa ny tombotsoan'ny mpanjifanao koa.
Ny fitadiavana singa toy ny haben'ny mpihaino sy ny masontsivana fividianana sasany mba hiorenan'ny fifampiraharahana hahazoana taha ambany kokoa ho an'ny mpanjifa rehetra dia zavatra iray mety ho lakilen'ireto fampielezan-kevitra ireto. Raha vantany vao ampidininao ny tahananao, hihena ny vidinao isaky ny valiny ary hiakatra ny ROI sy ny tombom-barotrao.
Christina Ross, mpiara-manorina ny Silver Frog Marketing
Amin'ny fifampiraharahana amin'ireo isa ireo alohan'ny hiresahanao amin'ny mpanjifa dia mihidy amin'ny tahan'ny orinasa ianao izay mety ho sarotra ho an'ny mpifaninana ny mandresy. Raha tokony hifampiraharaha mifototra amin'ilay orinasa manokana ianao, ny fifampiraharahana amin'ny farany dia afaka manome vidiny tsy miangatra ho an'ny gara sy ny mpanjifa.
Manaja ary mametraka teti-bola azo tanterahina
Nandritra ny areti-mandringana dia nisalasala ny hanokana teti-bola lehibe ireo orinasa noho ny tsy fahazoana antoka sy ny fisalasalana fa handany vola ny mpanjifa. Izany no antony maha-zava-dehibe ny hanohizan'ny orinasa ny tetibola ankafiziny sy hajain'izy ireo rehefa manomboka ny fampielezan-kevitra.
Atombohy hatrany amin'ny teti-bola ahazoanao aina. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny famakafakana ny tahan'ny lasa, ny traikefa ary izay niasa taminao sy ny orinasanao. Amin'ny fametrahana ireo mari-pahaizana ireo dia azonao atao tsara ny mahatakatra ny zavatra tokony holanianao mba hisintomana ny vola miditra.
Ity fahatakarana sy fanaovana resaka marina amin'ny mpanjifa ity mandritra ny areti-mandringana dia miteraka fahombiazana lehibe. Amin'ny alàlan'ny fikarohana ny angon-drakitra momba ny tsena, ny fijanonana eo amin'ny taha ambony sy ny fitazonana ireo kaonty tompon'andraikitra amin'ny fotoanan'izy ireo hahazoana crédit, ny orinasa dia afaka mametraka fandresena lehibe ho an'ny mpanjifany.
Manaova fandaharam-potoana mahomby
Ny areti-mandoza dia tena sarotra nivezivezy satria antony tsy ampoizina. Tsy manana fahitana momba ny fiatraikany na ny lalan'ny areti-mandringana fotsiny isika satria tsy mbola nitety an'io mihitsy isika teo aloha. Mandritra io fotoana io dia ilaina ny miovaova hatrany ny fampielezana doka.
Ny famandrihana mpanjifa fotsiny mandritra ny tapa-bolana, na iray volana, amin'ny fotoana iray dia mamela ny fahalalahana manatsara. Io dia ahafahan'ny masoivoho mamakafaka isa sy manapa-kevitra hoe iza ny tsena, ny gara ary ny andro-maraina no tsara indrindra ary aiza no misy ny fampielezan-kevitra hahafahanao mifantoka amin'ireo mpanao tsara indrindra fa tsy mandany ny volan'ny mpanjifanao.
Ity fahafaha-manao ity dia ahafahan'ny orinasa sy ny masoivoho mivezivezy tsy tapaka amin'ny fampielezan-kevitra ataon'izy ireo hahazoana ROI avo kokoa. Raha mbola miova hatrany ireo faritra voadona mafy indrindra ary mamaha ny fetran'ny fanjakan'ny fanjakana momba ny fisokafana indray, mamela ny fampielezan-kevitrareo hanana fahafaha-mandanjalanja hatrany dia ahafahan'ny dolara fanaovana dokambarotra mihodina miaraka amin'ireo totohondry tsy ampoizina atrehantsika amin'izao fotoana izao. Ny fampielezan-kevitra mijanona sy maharitra kokoa dia handany ny dolara fanaovana dokambarotra ary hiteraka valiny ambany kokoa miaraka amin'ny vidiny avo lenta isaky ny antso.
Kisary amin'ny antoandro kendrena
Nandritra ny areti-mandringana dia nisy ny fanjifana sasany mpanjifa raha ny sasany kosa niasa tao an-trano.
Indraindray izahay dia manana mpanjifa maneho ny ahiahiny kely momba ny fandefasana mandritra ny andro noho ny fiheverana diso fa ny olona rehetra mijery TV mandritra ny andro dia tsy an'asa. Lavitra ny fahamarinana izany, na dia talohan'ny areti-mandringana aza, saingy ankehitriny dia vao mainka tsy vitsy noho izany ny olona maro miasa any an-trano. ”
Steve Ross, mpiara-manorina ny Silver Frog Marketing
Miaraka amin'ny fahamaroan'ny olona mijery fahitalavitra sy mihaino radio, dia nihena ny vidin'ny isan-olona. Betsaka ny olona no tonga ao an-trano ary misy olona maro kokoa mahita ny dokam-barotra momba ny vokatra ary miantso.
Zava-dehibe ny manararaotra ireo slot ireo satria manohy miova ny mpijery. Amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ity mpihaino vaovao ity dia hapetraka eo imason'ny olona afaka mampiasa vola ny vokatrao. Izy io koa dia mamela ny fidirana amin'ireo izay mety tsy ho azonao alohan'ny areti-mandringana noho ny fandaharam-potoanan'ny asa sy ny fijerena ambany ny demografika sasany.
Mamolavola tetika fandrefesana manokana
Rehefa mamaly ny doka dokam-barotra ny mpanjifa, ny manontany fotsiny hoe aiza no nahitan'izy ireo ilay dokam-barotra dia mety hitera-doza. Satria ny ankamaroan'ny fotoana dia mifantoka amin'ny vokatra ny mpanjifa ka tsy tadidiny izay nahitany azy. Izany dia mety hiteraka tatitra tsy marina ataon'ny mpanjifa.
Mba hanampiana handrefesana ny doka, tsara kokoa ny mampiasa nomeraon-800 marina isaky ny varotra. Azonao atao ny mampifandray azy ireo ary manana ireo nomerao ireo hivezivezy ao amin'ilay ivontoerana fiantsoana iray ihany ho an'ny filàn'ny mpanjifanao. Amin'ny fanomezana isa marim-pototra isaky ny doka dia azonao atao ny manara-maso ny toerana niavian'ny antso sy ny fanaovana tatitra marina kokoa. Amin'ity fomba ity, fantatrao tsara hoe inona ny gara no mahazo tombony indrindra amin'ny mpanjifanao hahafahanao manohy manery ny loharanom-bola mahomby sy manangana ROI.
Ireto isa ireto dia mety hanampy rehefa mahazo izay toby sy tsena tokony hotohizan'ny fampielezan-kevitrao. Amin'ny tsy fananana fandrefesana valiny marina, dia tsy vitan'ny hoe handratra ny fampielezan-kevitrao, fa hanimba ny teti-bolanao ihany koa.
Rehefa nifanehatra tamin'ny orinasa maro izay tsy nahalala raha ho tafavoaka velona amin'ny areti-mandringana i Silver Frog Marketing, dia nanohy ny ezaka hamerina ny fahombiazany teo aloha izy ireo. Nanomboka tamin'ny fampitomboana ny tetibolan'ny mpanjifa 500%, hatramin'ny fampihenana ny vidin'ny mpanjifa 66%, dia nampitombo ny vola miditra sy miverina amin'ny fampiasam-bola ireo mpandraharaha mandritra ny tampon'ny areti-mandringana; nandritra ny fotoana kelikely nandany vola kely noho ny taloha.
Amin'izao fotoana izao, zava-dehibe ho an'ny orinasa ny manohy manao dokambarotra mba hiverina amin'ny fatiantoka rehetra ary hitombo hatrany.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny torohevitra sy tetika hanatsarana ny fampielezan-kevitra mandritra ny areti-mandringana ianao na ny orinasanao dia tsidiho ny Marketing amin'ny sahona volafotsy tranonkala.
Tags: hanambarateti-bolafitomboan'ny orinasaCoronavirusFanovàna dizitalyToe-karenafandaharam-potoana miovaovaareti-mifindratetibola varotrafandrefesana ny varotrafifampiraharahana amin'ny varotrafivarotanaslot kendrena amin'ny antoandro
May 6, 2021 amin'ny 5: 46 AM
Tena namely mafy ny orinasa ilay areti-mandringana. Saingy ireo izay afaka nifanaraka tamin'ny fepetra vaovao dia nanohitra. Mahaliana sy fampahalalana. Misaotra anao!